लगानी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक पक्षपात र मन जाल | अर्थव्यवस्था वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | | बोल्सा, उद्यमीहरू
मानिससँग संसारको सम्बन्ध प्रत्येक केसमा फरक छ। सामान्य रूपमा, तथापि, त्यहाँ केहि बान्की, सम्बन्ध, पक्षपात, र व्यवहार समान छन्। मानव प्रकृति र लगानी बीचको त्यो सम्बन्ध वास्तवमै धेरै निकट हो। पैसाले मानिसहरुमा भावना नहुन सक्छ, तर मानिसहरुलाई पैसाको भावना हुन्छ। पूर्ण तार्किक सम्बन्ध, तर यो जुन तार्किक रूपमा हुन्छ। त्यसैले लगानी गर्दा मनोविज्ञान को महत्त्व को महत्त्व।
हामी धेरैजसो समय अनजाने काम गर्दछौंयसको लगभग 95%%। आफुलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्ने र घटनाहरूलाई उचित परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने निर्णय लिनको लागि आवश्यक छ। र जब यो आउँछ कि तपाइँको पोर्टफोलियोमा कती पूंजी हुन सक्छ, अन्तिम कुरा भनेको गैर-तर्कसंगत निर्णयहरू गर्नु हो। यद्यपि हामी मानव हौं, र हामी समयको १००% तर्कसंगत हुन सक्दैनौं। त्यस कारणका लागि, म केहि बारे मा कुरा गर्न जाँदैछु ढाँचा जुन सामान्य तरीकामा विकसित हुन्छ। कारकले तपाईको निर्णयलाई प्रभाव पार्दा तपाईलाई के कुराले नेतृत्व दिन्छ, जुन त्यहाँ हुनुहुन्न।
1 लगानीमा कन्फर्मेसन पूर्वाग्रह
1.1 पुष्टिकरण पूर्वाग्रह विरुद्ध कसरी रक्षा गर्ने?
1.2 ढाँचाहरूको लागि खोजी गर्नुहोस् (वित्तमा प्यारेडोलिया)
2 ड्र्याग प्रभाव, मनोविज्ञान लगानी
2.1 कार्यको लागि प्रभाव उदाहरण तान्नुहोस्
3 Vण बनाम अपेक्षाहरू
3.1 भ्रम पैसाको दुरुपयोग को उदाहरणहरु
लगानीमा कन्फर्मेसन पूर्वाग्रह
कन्फर्मेसन बायस हो व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति त्यो प्राथमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ जुन तिनीहरूको सिद्धान्तहरूको समर्थन गर्दछ वा पुष्टि गर्दछ र केहि को बारे मा परिकल्पना। उदाहरण:
एक व्यक्ति विश्वास गर्दछ कि पृथ्वी सपाट छ। जानकारीको खोजी गर्नुहोस् जुन उनीहरूको सोच्ने तरिकालाई समर्थन गर्दछ। जानकारी खोज्नुहोस्, र सोच्नुहोस् "आह! मलाई थाहा थियो! पृथ्वी समतल छ! »।
एक व्यक्ति विश्वास गर्छ कि त्यहाँ केहि को बारे मा एक षडयन्त्र छ। उसले सूचना खोज्दछ जुन उसको सिद्धान्तहरु मान्य गर्छ र उसले यसलाई फेला पार्छ। फेरि सोच्नुहोस् ... म कति चतुर छु! उहाँ ठीक हुनुहुन्थ्यो! ".
त्यहाँ तर्कका दुई प्रकार छन्, डिडक्टिव र इन्डक्टिव। डिडक्टिभ एउटा निष्कर्षमा पुग्न परिसरमा केन्द्रित हुन्छ, र एक निष्कर्षलाई मान्यीकरण गर्ने परिसर खोज्न प्रेरक हुन्छ। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह तब, आगमनात्मक तर्कको बारेमा एक प्रणालीगत त्रुटि हो। एउटा सामान्य प्रवृति जुन अन्तमा कम वा अधिक डिग्रीसम्म हामी सबैले देखाउँदछौं।
Es अत्यधिक खतरनाक र विनाशकारी, र यसैले मैले यसलाई पहिलो स्थानमा राखें। यसले हाम्रो जीवनमा सोच्न सक्ने भन्दा बढी असर गर्दछ, र पाठ्यक्रम आर्थिक रूपमा। यो एक प्रमाणित तथ्य हो कि धेरै लगानीकर्ताहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूले रोजेका लगानीहरू राम्रो हुन सक्छन्, तर असुरक्षित महसुस गर्छन् (डर)। त्यहा बाट, तपाइँको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने जानकारी खोज्नु गल्ती हो। यस्तो प्रकारको व्यवहारमा संलग्न एक लगानीकर्ताले रोक्नु पर्छ र लगानी गर्नु हुँदैन। जबसम्म तपाईका निष्कर्षहरू कडा हुन्छन् कि अरुको राय वा मूल्या assessment्कनमा निर्भर हुने छैनन्।
त्यो अनुसार कार्य गर्न असफल दाग र अतिविश्वस्त निर्णय गर्नुहोस् र यो के लायक छैन केहि overayay। तपाईले यस व्यवहारलाई आर्थिक बुलबुलेमा अवलोकन गर्नुहुनेछ।
पुष्टिकरण पूर्वाग्रह विरुद्ध कसरी रक्षा गर्ने?
यदि एक लगानीकर्ताले यस पूर्वाग्रहको विकास गर्न थाल्छ भने, यसलाई रोक्नको लागि तरिकाहरू छन्। ती मध्ये एक बारे हो कसैको स्थितिलाई कल्पना गर्नुहोस् जसले छानिएको कम्पनीमा लगानी गर्दैन। त्यहाँबाट तर्क दिनुहोस् कि यो एक राम्रो लगानी हो भनेर अस्वीकार गर्नुहोस्। एक प्रकारको "छलफल" गर्नुहोस्।
अर्को प्रविधि हो कल्पना गर्नुहोस् कि सबै वा लगानीको एक ठूलो हिस्सा हराएको छ, र आफैलाई सोध्नुहोस् कि किन हुन सक्छ।
लगानीकर्ताहरू जसले उनीहरूको निर्णयहरूको आधारमा उनीहरूलाई पुष्टिकरण पूर्वाग्रहमा पर्न दिदैनन्, बेसी उच्च प्रतिफलको कटनी गर्छन्।
ढाँचाहरूको लागि खोजी गर्नुहोस् (वित्तमा प्यारेडोलिया)
दोस्रो, र पनि धेरै विनाशकारी। एउटा तरिका जुन तपाईंको दिमागले तपाईंलाई ट्रिक गर्न सक्दछ एउटा यो यसको कन्फिगरेशनबाट हो। हामी समानताहरू, समानताहरू र प्रतिमानहरू हेर्नको लागि प्रोग्राम गरिएका छौं जताततै। यो सफ्टवेयरको जस्तो छ जुन तपाईंमा स्थापना भएको छ, तपाईं यसलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्न। यस घटनाको कुनै धारणा छैन यसले तपाइँको मस्तिष्कले निर्माण गरेको सम्भावित "गल्तीहरू" लाई विश्वास गर्न नेतृत्व गर्दछ, तर तिनीहरू वास्तवमै भ्रम हो।
यो एक बुद्धिमत्ता समस्या होईन। वास्तवमा यो हामी कसरी संसारलाई चिन्छौं भन्ने कुराको आधार हो, हामी शब्दहरू बुझ्छौं, हामी वातावरणलाई बुझ्छौं, र हामी आशा गर्छौं केही हुन्छ।
अन्धविश्वास। किनकी केहि धेरै पटक भएको छ मतलब यो फेरि हुन्छ भनेर होइन। जबसम्म कारणहरू ठोस हुन्छन्।
यदि तपाईं तार्किक, गणितीय र त्यसकारण विश्लेषणात्मक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, म पक्का छु कि तपाईंले अनजाने रूपमा धेरै उद्धरणहरूमा ढाँचा देख्नुहुनेछ। यो कौशल अविश्वसनीय हो, यो निरन्तर र बाध्यतापूर्वक गरिन्छ। तर जसरी त्यहाँ बादलहरू छन् जुन महँगो देखिन्छन् र छैन, तपाईले यो जान्नु पर्छ कि एक अर्कामा जडान बिना नै के हुन्छ।
ड्र्याग प्रभाव, मनोविज्ञान लगानी
ब्यान्डवोन प्रभावको रूपमा परिचित, ब्यान्डगागनमा जम्पि।। यो अवसरको अवसरबाट उत्पन्न हुन्छ कि अन्य मानिसहरूले कसरी कुनै चीज विश्वास गर्छन् र नक्कल गर्न चाहन्छन्। अक्सर किनभने कुरा राम्ररी चलिरहेको छ (वा यस्तै देखिन्छ)। र के कारण यसले सामान्यतया उत्पादन गर्छ वा कार्यको लागि माग बढ्दछ, उदाहरणका लागि। माग बढ्ने बित्तिकै मूल्य बढ्न थाल्छ, र यदि धेरै व्यक्तिले नाफा कमाउँछन् भने अरूले अवसर गुमाउन नचाहेकोमा चासो लिन थाल्छन्, माग बढ्दो छ र यसैले मूल्य।
यो प्रोफेटेट प्रभाव को मुख्य हो बुलबुले वित्त मा। यसले धेरै मानिसहरूलाई समात्छ, राम्रो लगानी र मनोविज्ञानको साथ पनि केहि लगानी गर्दा। र आफ्नो बचाउको लागि उत्तम तरिका भनेको सबैलाई समान काम गरेको देख्नु हो, सोच्न रोक्नुहोस्, र आफैलाई सोध्नुहोस् "म के गल्ती गर्छु?" सामूहिक आनन्दको यो घुमाउरो प्रवेश नगर्नु लगभग जहिले पनि तपाईंलाई लाग्ने ठूलो पूँजी घाटाबाट बचाउनेछ।
कार्यको लागि प्रभाव उदाहरण तान्नुहोस्
हाल हामी शेयर बजारमा सूचीबद्ध भएका कम्पनीहरूको सेयरहरू फेला पार्न सक्छौं, जसको संख्याले उनीहरूको शुद्ध नाफाको लागि हामीलाई धेरै उच्च मूल्य निर्धारण दिन्छ। हो, ठूलो हदसम्म तिनीहरू ती लगानी दर्शन कम्पनीहरू हुन् "वृद्धि"। जे होस्, ती सबैले सँधै तपाईंको अपेक्षालाई पूरा गर्दैन, र कहिलेकाँही रेटिंग्सहरू हुन्छन् जुन धेरै उच्च हुन सक्दछ। यति धेरै कि कागज मा कहिलेकाँही सुरम्य परिदृश्य हुन्छ। एक उदाहरण कल्पना गर्नुहोस् जुन वास्तविक केस हुन सक्छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई भेट्नुहुन्छ। र उनी भन्छन् कि उसको एउटा कम्पनी छ जसको कुल सम्पत्ति $ 50.700 हो, र उसको $ण १०$,105.300०० छ र यो बेच्न उसले सोचिरहेको छ। त्यो हो यदि तपाईं अधिक वा कम आफ्नो सबै कोषहरू बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईं आउन आधा तिर्न सक्छ। तपाईंले उसलाई सोध्नुभयो ... "हे, र तपाईंले गत वर्ष कति कमाउनुभयो?" र उसले उत्तर दियो कि उसले $ १२०० डलर जित्यो। तपाईं एक धेरै स्मार्ट व्यक्ति को रूपमा, तपाईं पछिल्लो बर्षको परिणामहरुमा हेर्नुहुन्छ। र तपाई देख्नुहुन्छ कि तपाईको debtण तपाईको कमाई भन्दा छिटो बढ्छ।
हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईं उसलाई सोध्नुहुन्छ कि त्यसले त्यसको लागि कति बेच्छ, र उसले त्यसको उत्तर दिन्छ 1.640.000 १,12.000०,००० एक कम्पनी जसले yearणको साथ एक वर्ष $ १२,००० दिन्छ जुन बढ्न रोक्दैन। तपाईं के जवाफ दिनुहुन्छ? "हो हो, $ १,,1.640.000०,००० मेरो लागि उचित मूल्य जस्तो देखिन्छ!" वा बरु तपाईं सोच रहन ... "यो सम्भव हुन सक्दैन".
कहिलेकाँही हामी प्रयासमा फस्न सक्दछौं र सम्पत्तिहरू देख्दछौं जुन त्यो सफलताबाट फाइदा लिन मूल्यमा बढ्दो रोक्दैन। समस्या यो बिर्सिन सक्छ कि अन्त मा शेयरहरु वास्तविक कम्पनीहरु को भाग प्रतिनिधित्व गर्दछ र कि यो मूल्यांकन धेरै तार्किक नहुन सक्छ। सधैं सबैसँग यसको उचित मूल्य हुँदैन, किनभने मोडेल वा वृद्धि अपेक्षाहरूले मूल्य निर्धारणलाई बढी वा कम उच्च बनाउन मद्दत गर्दछ। एक राम्रो मनोविज्ञान राख्नु जब लगानीले हामीलाई बुलबुले टाढा रहन मद्दत गर्दछ।
Vण बनाम अपेक्षाहरू
के तपाईं कसैलाई चिन्नुहुन्छ जो अधिक र अधिक accumण स ?्कलन गर्दछ? यसले त्यो लुपमा प्रवेश गर्दछ जुनबाट यसलाई छाड्दैन। के तपाईंलाई थाहा छ यदि तपाईंसँग बचत छ र ती लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले के हासिल गर्ने आशा गर्नुहुन्छ? ठिक छ, यो केस बुझ्नको लागि सरल छ, तर केहि कारणका लागि, मैले यो आचरणलाई धेरै सामान्य तरीकामा अवलोकन गरेको छु.
त्यहाँ जो मानिस या त कम्पनी, loansण धितो, वा कार्ड संग कुनै withण, आदि संग etc.-6% को आदेश को ब्याज तिर्न वा अधिक। वास्तवमा राक्षसी प्रतिशत समस्या यो छ कि यदि तपाईले केहि बचत गर्नु भयो भने के प्रयोग गर्नु भनेको त्यो पैसा दिनु हो। विरोधाभास तब हुन्छ जब एक व्यक्तिले निर्णय गर्दछ कि सब भन्दा सफल चीज भनेको शेयर बजारमा लगानी गर्नु हो वा २% ब्याज दिने उत्पादनहरू किन्नु हो (उदाहरणका लागि)। यदि तपाईंसँग लगानी गर्दा राम्रो मनोविज्ञान छ, र हामी पैसाको भ्रममा पर्दैनौं, हामी यो निर्णय गलत भएको देख्दछौं।
भ्रम पैसाको दुरुपयोग को उदाहरणहरु
वस्तुहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा हेरौं:
%% वा अधिकको incण खर्च गरियो। र तपाईंसँग तरलता ("अधिशेष") छ जसको तपाईं २% कमाउन चाहानुहुन्छ। थप मान्नुहोस्, कि तपाईंको बचत तपाईंको debtण बराबर छ ...
यदि मैले भने "मैले 20.000% मा ,7 २०,००० को contण सम्झौता गरेको छु, र ती २०,००० डलर संग म एक उत्पादन किन्न लागेको छु जुन मलाई प्रति वर्ष २% ग्यारेन्टी दिन्छ" ... उनीहरूको सही दिमागमा कोहीले सोच्ला कि कि म हो झूट बोलेको वा मलाई केहि थाहा छैन म के भनिरहेछु।
ठिक छ, म यो ती मानिसहरुमा केन्द्रित भएको भन्छु, किनभने उनीहरूसँग ठूलो debtण छ, विश्वास छ कि चालान कुरा यसबाट छुटकारा पाउँदैन र अन्य उत्पादनहरू किन्नको छैन। यो हुन सक्छ कि व्यक्ति, जीवनको दर्शनको रूपमा, आफ्नो debtण घटाउन र दिनदिन दिनको प्रतिजीवनमा इच्छुक छैन। पूर्ण सम्मानजनक। तर बचत, maintainingण कायम राख्ने, र भुक्तानी गरिएको ब्याज भन्दा कम प्रतिफल प्राप्त गर्दै ... होइन। यसको साधारण तात्कालिक आधार छैन।
म आशा गर्दछु कि यी पाठहरूले तपाईंको सेवा पुर्‍यायो, र तपाईंको आर्थिक र जीवनको निर्णयहरू अबदेखि ठीक हुनेछ। हाम्रो मानसिक जालहरू र तपाईंको मनोविज्ञान कसरी काम गर्ने बारे जान्न लगानी गर्दा, राम्रो निर्णय लिन मद्दत पुग्छ, र यति धेरै गल्तीहरू गर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » लगानी मनोविज्ञान
२०२१ मा सफल लगानी कोष छनौट गर्दै
तिनीहरू कहिले हड्तालमा प्रवेश गर्छन्?